Qaybo ka mid ah waraaqaha birta ah ee goynta leysarka iyo alaableyda | Ouzhan
Isticmaal laydh cufnaanta sare leh oo laser si aad uhesho waxyaabaha la jarayo, si maadadu si dhakhso ah ugu kululeyso heerkulka uumiga, oo uumi baxdo si ay u sameyso godad. Markay dogobku u dul socdaan alaabta, godadka ayaa si isdaba joog ah u sameysmaya jajabyo leh balac aad u cidhiidhi ah (sida qiyaastii 0.1 mm). Dhamee jarista maaddada.
Xaashida biraha xaashida biraha xaashida ah - habka saxda ah ee loo maro xaashida birta
Ouzhan waxay ku siineysaa kala duwanaanta dalabka mashiinka goynta birta birta: aerospace, dhisida markabka, mashiinada beeraha, mashiinada saxda ah, qalabka ilaalinta deegaanka, qalabka caafimaadka, qalabka jir dhiska, qalabka guryaha iyo qalabka guryaha, qalabka jikada, qalabka elektarooniga ah, laambadaha iyo laambadaha, shaashadaha, farsamooyinka birta, aluminium Furuqa, aluminium darbigiisa, kabadhka korantada, warshadaha baabuurta, warshadaha xayeysiinta, warshadaha xaashida iyo warshadaha kale. Mashiinka goynta laser-ka ayaa shaqeyn kara: birta kaarboonka, birta birta ah, birta birta ah, birta guga, birta isku-dhafan, isku-darka manganese, isku-darka titanium, aluminium, aluminium-aluminium, saxan aluminium, saxan galvanized, saxanka elektroonigga, saxanka pickling, naxaasta iyo qalabka kale.
Faa'iidooyinka Ouzhan sheet biraha goynta laser biraha
- Ka baaraandeg la'aan
- Qalooc yar oo jeexitaan cidhiidhi ah
- Midab aad u saafi ah
- Cufnaanta tamar aad u sarreysa
Nadiif, badbaado iyo wasakh la'aan
Ouzhan OEM kartoo sheet sheet biraha goynta laser-Shiinaha Shanghai sheet biraha goynta laser biraha qaybo soo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, xaashida saxda ah ee goynta birta qaybaha birta oo leh tayo deggan oo la isku halleyn karo ayaa lagu shaqeyn karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka saxda ah ee qaybaha mashiinka goynta laser-ka. Intaa waxaa dheer, alaabada goynta birta birta ah ee xaashida ah ayaa si adag loo waafajiyaa heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan loogu talagalay goynta birta birta ah iyo alaabada goynta leysarka macaamiisheenna qiimaha leh.
Faa'iidooyinka goynta laser biraha sheet
⑴ Isticmaalidda nidaamka goynta leysarka saddex-geesoodka ah ama qaabeynta aaladaha loo yaqaan 'robot-ka' loo yaqaan 'robot-ka' si loo jaro gooladaha meeraha, soo saar software kala duwan oo saddex geesood ah oo wax lagu gooyo si loo dedejiyo geedi socodka laga bilaabo sawiridda iyo jarista qaybaha.
⑵ Si loo hagaajiyo wax soo saarka wax soo saarka, cilmi baarista loona horumariyo nidaamyada goynta gaarka ah ee kala duwan, nidaamyada gudbinta alaabada, nidaamyada wadista gawaarida toosan, iwm., Iyo xawaaraha goynta nidaamka goynta ayaa dhaaftay 100m / min.
Si loo balaadhiyo codsiyada mashiinada injineernimada, warshadaha dhisida maraakiibta, iwm, dhumucda goynta birta kaarboonka yar ayaa dhaaftay 30mm, waxaana si gaar ah fiiro gaar ah loo siiyay cilmi baarista ku saabsan habka farsamada ee jarista kaarboonka yar ee nitrogen si loo wanaajiyo tayada goynta saxamada qaro weyn. Sidaa darteed, ballaarinta aagga arjiga warshadaha ee goynta leysarka CO2 ee Shiinaha iyo xallinta dhibaatooyinka farsamo ee codsiyada cusub wali waa mowduucyo muhiim u ah injineerada iyo farsamayaqaannada.
Maxay yihiin codsiyada goynta birta birta xaashida ah
Goynta birta: Goynta leysku waxay heli kartaa nadiifin, ka jilicsan oo ka sii adag goynta farsamada. Sida mashiinka, sidoo kale waa la qorsheyn karaa oo la hagi karaa kumbuyuutar, taas oo macnaheedu yahay in mashiinka goynta leysku si otomaatig ah u soo saari karo qaybo badan oo bir ah oo loogu talagalay warshadaha sida baabuurta iyo kombiyuutarada.
- Birta milicsiga: Iftiinka iftiimaya ma dhaawici doono fiilada indhaha. Biraha sida aluminium, qalin, naxaas, iyo dahab dhammaantood waa kuwo milicsanaya waxayna muhiim u yihiin soo saarista baabuurta iyo semiconductor.
–Sayniska Cilmiga Caafimaadka: Goynta Laser sidoo kale door muhiim ah ayey kaga jirtaa warshadaha caafimaadka. Warshadaha caafimaadka, saxsanaanta aadka u saraysa iyo dulqaadashada cabirka adag ayaa muhiim ah. Sababtoo ah baahida warshadaha caafimaadka ee soosaarka mugga sare leh, tikniyoolajiyaddan waxay la kulmeysaa baahidooda maxaa yeelay waxay soocelin kartaa naqshadaha, si sax ah iyo dhaqso labadaba.
Noocyo badan oo aaladaha caafimaadka ah waxay leeyihiin asal ahaan goynta leysarka, laga bilaabo qalabka wadnaha iyo orthopedic ilaa qaybaha qalitaanka ee qalliinka. Goynta leysarka, aaladahaan waxaa lagu soo saari karaa xawaare dheereeya iyaga oo aan u hurin saxnaanta.
Faa'iidooyinka adeegga goynta leysarka birta ah ee Ouzhan
- Dhamaan goynta saxarada birta saxda ah waxay kuxirantahay kormeerka tayada adag.
- Adeegga degdegga ah ee OEM wuxuu xaqiijin karaa inaad hesho alaabada aad rabto, taageer DDP, CIF, FOB iyo hababka kale ee lacag bixinta si loo hubiyo in macaamiisha ay alaabada u heli karaan si badbaado leh.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro loogu talagalay soosaarida goynta leysarka birta saxda ah.
- Ouzhan wuxuu leeyahay in kabadan dersin mishiinada wax lagu farsameeyo, adeegyo isku dhafan, khadadka wax soosaarka caadiga ah, wuxuuna la yimaadaa shahaadooyin shey iyo warbixinno tijaabo ah.
Hore: OEM qaybo foorari biraha sheet
Xiga: Qalabka goynta leyska birta ah ee birta ah
Qaybo ka sameysma birta kaarboon